Madaxweyne Farmaajo oo laba arriin oo muhiim ah ku muujiyey socdaalkii Abiy - Caasimada Online
Home Maqaalo Madaxweyne Farmaajo oo laba arriin oo muhiim ah ku muujiyey socdaalkii Abiy
Madaxweyne Farmaajo oo laba arriin oo muhiim ah ku muujiyey socdaalkii Abiy
Abiy Ahmed, wuxuu madax ka yahay dal 100 milyan oo muwaaddin leh, wax soo saarkiisa (GDP) gaaray 72.37 bilyan USD (2016), kobociisa sannadkii 2016 gaaray heer sare 7.6%, dakhliga qarankiisa gaaray 177 bilyan oo dollars (2016), awood siyaasadeed iyo mid ciidanba ku leh Africa. Wuxuu booqday dalal muhiim, oo dowlado xasilloon, oo balan iyo heshiis la isku halleyn karo lala gali karo, oo Afrika ku yaalla oo Kenya, Djibouti iyo Masarba ay ku jiraan.
Soomaaliya, waa 12 milyan oo muwaaddin (1/10 meel hal meel marka loo barbardhigo Itoobiya), 6.217 bilyan USD (2016) (1/10 wax soo saarka Itoobiya), dal rubuc qarni qalalaase ku jira, dowladd dhexe oo aan heshiis lala galay weli si isku haleyn leh fulin karin, sida Masar, Djibouti, iyo Kenya, oo si sahal ah loo garab mari karo, oo laga yaabo in madaxweynaheeda uu Ugaas beeleed ka awood badan yahay, haddanna RW Itoobiya Abiy Ahmed Ali, wuxuu yimid Muqdisho, taas oo ka dhigan in Soomaaliya ay ayadoo weli tabar darran tahay, ay markaan qaadan karin wax ka yar ixtiraam dowladnimo.
1- In Soomaaliya ay diyaar u la tahay dowlad walba maalgashi iyo ganacsi heerar kale duwan,
2- In Soomaaliya, haba tabar darnaatee, ay tahay dal ugu yaraan muujin kara in aysan la macaamili karin shisheeya aan madax bannaanideeda iyo gobanimadeeda ixtiraamin.
Qodobka labaad ayaa shardi u ah in kan koowaad la isla gaaro. Sida ka muuqata heshiiska 16 qodob ah ee maanta ay isla madaxweyne Farmaajo iyo RW Itoobiya, waxaa cad in
Cadaawadda gaamurtay ee ka dhaxaysay waxaa bedelay dhaqaale is weydaarsi, China waa suuqa ugu weyn ee Japan, kala bar shirkadaha China waxay deggan yihiin China. China, Japan wuxuu u yahay suuqa labaad, Maraykan kaddib.
“Labada mas’uul waxay soo dhaweeyeen dhismaha guddi ka shaqeeya iskashiga labada dal oo horey loogu heshiiyay,kaasi oo ah heer wasiiro,kaasi oo ka shaqeyndoona horumarinta ilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee labada dhinacaba leh”.
Wasiiro 4.5 ku yimid, ama kuwo u bisil musuq iyo laaluush, oo aan inta badan lahayn xirfad ah in ay xildhibaano beeshooda u soo doortay, in mas’uuliyadda noocaan ah gacanta loo geliyo waa halis weyn.
Dadka dhahaya Itoobiya dad bay ka leedahay dekedaha, waa run, laakiin anaga dan ma kala leenahay dekedaha? Taasi waxba kama duwana Erdogan dan buu naga leeyahay dadka dhaha, oo ku qeylinayay maxaa Aden Adde Airport, dekedda, xaruumaha caafimaadka Turkey loogu wajeejiyay. Eega garoonka inuu xirnaa 20 sanno, oo hal doollar laga helin, dekedda in ay xirneyn, oo madfac liif ah saarnaa, isbitaalka Digfeer in ari carbeed uu joogay, dhufeys ciidan wax dila ahaa.
Baddaas dheer ee lagu faanno, iyo wax walba oo uu dalkaan leeyahay, anaga dan kama lihinee, Allahayow wax dan ka leh noo keen.